Soosaarida Carmature-ka Shiinaha iyo Warshad | Niitay
Armatures-ka bilowga ah ee aan soo saarno waxay ku habboon yihiin boqollaal moodello bilow ah.
NITEL soosaarayaasha qalabka bilowga ayaa si firfircoon isu dheellitiran, waxay si joogto ah ugu socdaan xawaare sare.
Mashiinka armature waxaa lagu farsameeyay mashiinada CNC, nolol dheer iyo isu dheelitirnaan heer sare ah. Khadadka fallaadhihii si fiican ayaa loo duubay si loo bixiyo saxsanaanta sare, iyo sidoo kale dusha sare ee dhulka.
NITEL waa sumcadda caanka ah ee Shiinaha oo bixisa waxqabadyo heer sare ah oo bilow ah oo aad markasta aamini karto.
Waxaan la yeelanay xiriirro waqti dheer, xasiloon oo wanaagsan oo lala yeesho soo saarayaal badan iyo jumladleyda adduunka oo idil. Waqtigan xaadirka ah, waxaan rajeyneynaa xitaa wadashaqeyn ballaaran oo lala yeesho macaamiisha dibedda ku saleysan faa'iidooyinka wadaagga ah. Fadlan si xor ah u nala soo xiriir wixii faahfaahin dheeraad ah.
Waxaa jira qalab soo saare & soo saarid casri ah iyo shaqaale xirfadlayaal ah si loo hubiyo in alaabada ay tayo sare leedahay. Waxaan helnay adeeg aad ufiican kahor iibinta, iibinta, iibka kadib si loo hubiyo macaamiisha ku nasan kara inay amarada bixiyaan. Ilaa iyo hada wax soo saarkeenu wuxuu u socdaa si xowli ah aadna looga jecel yahay Koonfurta Ameerika, Bariga Aasiya, bariga dhexe, Afrika, iwm.
Hore: Golaha bilowga Stator
Xiga: Shiinaha matoorro bilaa tayo sare leh oo loogu talagalay gawaarida Prestolite-M93R3004SE
Calaamadeyn cusub AS-PL Starter mootada
Awooda: 6.60, Voltage: 24, Afyare: 29, OD1: 83.20, OD2: 50.00, L.1: 255.00
Soo gal si aad u dalbato
Calaamadeyn cusub OEM BOSCH Qalabka bilawga ah
Awooda: 6.60, Voltage: 24, Afyare: 29, OD1: 83, L.1: 255.00
Awooda: 0.90, Voltage: 12, Afyare: 19, OD1: 60, L.1: 232
Awooda: 1.10, Danab: 12, Ilkaha / Splines: 10, Afyare, 27, OD1: 65, L.1: 253
Dib-u-habaynta AS-PL Bilowga
Awooda: 1.00, Danab: 12, Ilkaha / Splines-ka: 10, Goobaha: 25, OD1: 59.00, OD2: 34.60, OD3: 12.00, L.1: 227.00, L.2: 20.60
Awood: 0.90, Danab: 12, Ilkaha / Dhibcaha: 10, Goobaha: 28, OD1: 59, L.1: 206.5
Awooda: 0.90, Danab: 12, Ilkaha / Splines-ka: 10, Goobaha: 28, OD1: 59.00, OD2: 35.00, OD3: 12.00, L.1: 224.50, L.2: 34.00
Awooda: 5.00, Danab: 24, Afyare: 29, OD1: 83.00, OD2: 50.00, L.1: 235.50
Awooda: 5.50, Danab: 24, Afyare: 29, OD1: 82.90, OD2: 49.80, L.1: 269.90
Awood: 0.80, Danab: 12, Ilkaha / Dhibcaha: 10, Boolalka: 33, OD1: 60, L.1: 248.5
Mitsubishi-M008T75071 oo tayo wanaagsan leh ...
Bosch-0001231009 Shiinaha oo tayo sare leh sumad cusub s ...
Tayada wanaagsan & Qiimaha wershada qiimaha Bilowga ...
Qiimaha wanaagsan matoorrada biraha Mitsubishi-M009T70173 ...